रमाइलो – Himal Patrika
रमाइलोDecember 28, 2018
काठमाडौँ, १३ पुस । ट्रेलर र गीत बाहेक निर्माण युनिटले चलचित्र प्रदर्शनमा पुर्व अन्य कन्टेन्ट गोप्य राख्ने गर्दछन् । तर २० पौसबाट प्रदर्शनमा आउँने चलचित्र ‘जय श्री दाम’ले भने १५ मिनेट फिल्म देखाएको छ ।…
काठमाडौं, १३ पुस । माघ ४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘गरूड पुराण’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरिएको चलचित्रको ट्रेलर कमेडी संवादले भरिपूर्ण छ । ट्रेलरमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरु…
काठमाडौँ, १३ पुस । चलचित्र ‘आप्पा’मा समावेश ‘हावा सरर’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । उमेश थापाको शब्द तथा अनमोल गुरुङको संगीत रहेको गीतमा थुप्देन भुटिया र स्निहाश्री थापाले स्वर दिएका छन् । सार्वजनिक गीतको…
काठमाडौँ, १३ पुस । गायक मिलन अमात्यको स्वर रहेको ‘तिम्रो त्यो’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। हाइकुमार राईको शब्द र निरोज लामाको संगीत रहेको गीतमा प्रेममा धोका पाएपछिको पीड।लाई प्रस्तुत गरिएको छ। सोनम…
रमाइलोApril 23, 2018
कुनै पनि कुराको लत लग्नु राम्रो हैन। चाहे त्यो रक्सीको होस् चुरोट खैनीको होस् या अन्य कुनै कुराको लत यसले मानिसको सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। लत जेको पनि हुन् सक्छ र कतिपय मान्छेमा…
विश्वको ५ यस्तो देश जहाँ महिलाहरु सेक्सको लागि…
‘सेक्स’ भन्ने बित्तिकै हिन्दु राष्ट्र लगायत विश्वको विभिन्न देशहरुमा मानिसहरु लजाउने गर्दछन् र यसको धक खोलेर बोल्न लाज मान्छन । कतिपय त यसको बारेमा खुलेर पनि कुरा गर्दैनन् । यी कुराहरु एकातिर राखेर विश्वमा यस्तो…
के सफल वैवाहिक जीवनका लागि भर्जिन हुन आवश्यक…
सफल वैवाहिक जीवनका लागि केही मानिसहरु केटी मान्छेको भर्जिनिटीलाई महत्वपूर्ण मान्छन् । तर मेडिकल विशेषज्ञहरु विवाह अघि नै गरेको सेक्सले विवाहपछिको सम्बन्धमा कुनै असर गर्दैन । सदियौदेखि महिलाको भर्जिनिटी उसको इज्जतसँग जोड्ने गरिएको छ ।…
तरुनी फकाउने काइदाको उपाय! जानी राख्नुहोस्………
युवतीलाई मन पराउनुहुन्छ र ती युवतीले तपाईलाई टेडो आँखले पनि हेरेकी छैनन् ? तैपनि तपाई यसैको यादमा दिनरात बिताउनु हुन्छ । तपाई उनैलाई आफ्नो जीवन साथी बनाउन चाहनुहुन्छ। तर यो कुरा ती युवतीलाई पनि थाहा…
आफ्नो बच्चालाई खुवाएर बढीभएको दुध बेचेर लाखौं कमाउँछिन्…
परदेशMarch 15, 2018
वच्चा जन्मिएपछि स्तनपानका लागि दुध नपुगेर आजभोलि सुत्केरीहरु हैरान हुने गरेका छन् । नवजात शिशुलाई ६ महिनासम्म आमाको दुध खुवाउन निकै स्वस्थकर मानिन्छ । तर, पर्याप्त मात्रामा दुध नआएपछि उनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।…
आँखा सन्काएर चर्चामा आएकी प्रिया प्रकाशको बबाल फोटोशूट…
रमाइलोMarch 15, 2018
काठमाडौं, १ चैत । आँखाको इशाराले करोडौं दिल लुट्ने प्रिया प्रकाश वारियर फेरि एकपल्ट समाचारमा छाएकी छन् । अहिले प्रियाले एक फोटोशूट गराएकी छन् । फोटोशूटमा प्रियाले गुलाबी रंगको गाउन लगाएकी छन् । वूडपेकर फोटोग्राफ्सले…